Apple dia nanambara daty famoahana ny sarimihetsika CODA, mpandresy tamin'ny loka 4 Sundance | Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanambara ny daty namoahana ny sarimihetsika CODA, mpandresy tamin'ny loka 4 Sundance
Apple dia nanambara tamin'ny famoahana gazety, ny daty famoahana ny horonantsary voalohany manaraka izay tonga amin'ny serivisy horonantsary streaming. Miresaka momba ny CODA aho, horonantsary natolotra tamin'ny festival Sundance lasa teo ary nahazo loka 4. Ny premiere ny sarimihetsika Ambara amin'ny 13 aogositra io.
Ilay sarimihetsika CODA dia misy an'i Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Amy Forsyth, Kevin Chapman ary ny Ilay nandresy an'i Oscar Marlee Matlin, izay hiasa ho mpanolotsaina amin'ny lanonana Oscars faha-93 manaraka, ny alahady 25 aprily.
Ity sarimihetsika ity dia novokarina avy amin'i Vendome Pictures sy Pathé, miaraka amin'i Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger ary Jérôme Seydoux ary Ardavan Safaee ary Sarah Borch-Jacobsen izay mpanatontosa.
Mitantara ny tantaran'i Ruby (Emilia Jones), tovovavy 17 taona, umpikambana mandre ny fianakavian'ny marenina fotsiny (Ny CODA dia midika ho fanafohezana ny hoe Children of Deaf Adults). Ny fiainany dia mihodina amin'ny fandikana ny hevitry ny ray aman-dreniny (Marlee Matlin, Troy Kotsur) ary ny fiasana amin'ny sambo fanjonoana mianjady amin'ny fianakaviana isan'andro alohan'ny handehanany mianatra miaraka amin'ny rainy sy ny zokiny lahy. (Daniel Durant).
Nefa rehefa niditra tao amin'ny klioban'ny amboarampeo am-pianarany i Ruby dia nahita fanomezana ho an'ny fihirana ary tsy ela dia voasarika ho an'i Miles (Ferdia Walsh-Peelo) mpiara-miasa aminy. Nahazo famporisihana avy amin'ny talen'ny amboarampeo mafana fo sy henjana (Eugenio Derbez) izy, dia nanasa azy hisoratra anarana amin'ny sekoly mozika malaza, nefa nahita ny tenany i Ruby voaroba eo anelanelan'ny adidy tsapany amin'ny fianakaviany sy ny fikatsahana ny nofinofiny manokana.
Apple nahazo ilay zon'ity sarimihetsika ity amin'ny faran'ny volana janoary, mihoatra ny rakitsoratra rehetra momba ny festival tamin'ny alàlan'ny fandoavana vola firaketana hita ao 25 tapitrisa dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia nanambara ny daty namoahana ny sarimihetsika CODA, mpandresy tamin'ny loka 4 Sundance
Nomad dia mampihena tady mifanaraka amin'ny AirTag eo amin'ny solomaso misy anao sy rojo vy fanalahidy
Jiro latabatra sy jiro LED 10m mifanaraka amin'ny Meross HomeKit